/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / U-Ethynyl estradiol (57-63-6)
Akukho kalo SKU: 57-63-6. Udidi: Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
SIliso: I-CP, i-EP, i-USP, i-IP
Ukugcina: Okomileyo, omnyama kunye no-0 ukuya ku-4 C okwexesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki)
I-Ethinyl Estradiol powder yi-semisynthetic estrogen. Indlela yokusebenza kwe-ethinyl estradiol injenge-Agonist ye-Estrogen Receptor. Inamandla aphezulu e-estrogenic xa ilawulwa ngomlomo, kwaye ihlala isetyenziswa njengesixhobo se-estrogenic kwizicwangcisi zomlomo. I-Ethinyl estradiol ibophelela kwi-estrogen receptor complex kwaye ingena kwi-nucleus, isebenze ukukhutshelwa kwe-DNA yemfuza ebandakanyeka kwiimpendulo zeselfowuni. Le arhente ikwathintela ukunciphisa i-5-alpha reductase kwizicubu ze-epididymal, ezithoba amanqanaba e-testosterone kwaye zinokulibazisa ukuqhubela phambili komhlaza weprostatic. Ukongeza kwiimpembelelo zayo ze-antineoplastic, i-ethinyl estradiol ikhusela kwi-osteoporosis. Kwiimodeli zezilwanyana, unyango lwexesha elifutshane kunye nale arhente lubonakalisiwe ukubonelela ngokhuseleko lwexesha elide kumhlaza webele, ukulinganisa iimpembelelo zokukhulelwa.